1. Abanye babasebenzisi beMac abangekayazi indlela yokuthatha umfanekiso weskrini okanye bawubize nje umfanekiso weskrini. Kulungiselelwe abo bafuna indlela yokufaka iifoto-skrini, kufuneka ulifunde eli nqaku .. Kungenxa yokuba uthatha umfanekiso wesikrini siphela okanye yinxalenye yesikrini Akunzima njengoko ucinga! Ungasithatha njani umfanekiso-skrini kwiMac Esinye sezona zitshixo zibalulekileyo ekufuneka sizisebenzisile zezi: ● ukuyalela ● ishifti ● inombolo 3 ● inombolo 4 ● inombolo 6 ● ibar yesithuba apho kusetyenziswa khona la maqhosha. Kwaye ungayifumana njani nazo zonke iimodeli zeMac ezinje ngeMac Pro, iMac, iMacBook, iMacBook Pro, iMacBook Air, iMac mini. Masiqhubeke nezinye iindlela zokuthatha izikrini. Yeyiphi ekufuneka uyicinezele ngaxeshanye? Ngaba ikho nayiphi na ifomathi esinokuthi sithathe izikrini kuyo?
2. Thatha umfanekiso apho uwufuna khona ngokwezifiso ingingqi yawo.Cinezela kwaye ubambe amaqhosha oMyalelo kunye neShift kwaye ucinezele inombolo 4. Xa ucinezelwe ngaxeshanye, iMac yakho iya kubonisa uphawu, emva koko ucofe ubambe imouse kwaye utsale indawo oyifunayo. Umfanekiso ngoko Xa indawo oyifunayo igqityiwe, khupha imouse, efanelekileyo xa sifuna ukubamba indawo ethile. Xa usiva isandi esithi "snap", oko kuthetha ukuba ukubanjwa kugqityiwe. Umfanekiso ofakiweyo uya kugcinwa kwidesktop kwangoko.
3. Thatha umfanekiso wewindows yangoku.Ukucinezela nokubamba amaqhosha oMyalelo kunye neShift, cinezela inombolo 4 kwaye ukhulule zonke izandla. Ulandelwe ngu-Spacebar (+ uya kuvela ukuba awuyicinezeli i-Spacebar) xa usenza umfanekiso wekhamera. Cofa kwiwindow oyifunayo ukuze ubambe umfanekiso, ofanelekileyo ukufaka iwindow ethile yesicelo ngasinye. Xa usiva isandi esithi "snap", oko kuthetha ukuba ukubanjwa kugqityiwe. Umfanekiso ofakiweyo uya kugcinwa kwidesktop kwangoko.
4. Thatha umfanekiso-skrini weMac yonke kwiscreen esigcweleyo Ukwenza oku, cinezela kwaye ubambe amaqhosha oMyalelo kunye neShift, emva koko ucinezele inombolo 3. Oku kuyakuvumela ukuba ubambe ngokupheleleyo isikrini.Yonke into evulekileyo kweso sikrini iya kuboniswa ngokupheleleyo. Kufanelekile ukuba ufuna ukubona yonke isikrini. Xa usiva isandi esithi "snap", oko kuthetha ukuba ukubanjwa kugqityiwe. Umfanekiso ofakiweyo uya kugcinwa kwidesktop kwangoko.
5. Thatha umfanekiso weTouch Bar kwiMacBook Pro eza neTouch Bar, ukuba kukho umntu osebenzisa iMacBook Pro eza neTouch Bar, iya kuba yinkqubela phambili kuba iMac nayo ingathatha umfanekiso weTouch Bar nayo !! Wow.Ucofa njani ubambe amaqhosha oMyalelo kunye neShift kwaye ucinezele inombolo 6 xa usiva isandi esithi "Snap" kuthetha ukuba ukubanjwa kugqityiwe. Umfanekiso ofakiweyo uza kugcinwa kwiDesktop ngoko nangoko, enye indlela kukucebisa ukuba ufuna ukuhlela umfanekiso ngokukhawuleza, ungayenza xa ikepusi igqityiwe, kuba iMac izakusibonisa umfanekiso phambi kokuyigcina kwiDesktop. Ukuba ufuna ukubhala okanye ufuna ukumakisha amanqaku abalulekileyo Inokulungiswa kwangoko, ilungele nabani na ofuna ukwazi ezinye iindlela zokusebenzisa iMac, ungalibali ukucofa kunye nokulandela kunye. Qinisekisa ukuba uneendlela ezininzi ezilungileyo!